फोटोशप मार्फत छविमा कपालको रंग कसरी परिवर्तन गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
ग्राफिक डिजाइन आजकल ज्ञानको एक धेरै लोकप्रिय क्षेत्र हो। यो धेरै हदसम्म बाँकी छ बूम गर्न कि प्रविधि उत्पन्न भएको छ धेरै कार्यहरूमा जुन अब स्मार्ट उपकरण वा कम्प्युटरको आधारमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
यस क्षणबाट, काम नयाँ अवधारणाहरू प्राप्त गर्दछ जहाँसम्म यसको अभ्यासको सवाल छ, कम्प्यूटर मन पराउने मानिसहरू र यी उपकरणहरूले दिन बित्दै जाँदा अधिक र अधिक कभर गर्ने सबै कार्यहरूको लागि अन्तहीन विकल्पहरू उत्पन्न गर्दै।
आज, ग्राफिक डिजाइन मध्ये एक हो उत्तम ज्ञात अभ्यास क्षेत्रहरू सबै विश्व मा र यसको कार्यक्षमता मान्छे लाई अनुमति दिन्छ छविहरू सिर्जना, सम्पादन र परिमार्जन गर्नुहोस् जहाँसम्म कल्पनाले अनुमति दिन्छ। यो सबै प्रकारका रोजगारहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, जस्तै विज्ञापन, शिक्षा, डिजाइन वा अन्य गतिविधिहरू जुन योग्य छ डिजाइन कार्यक्रम को उपयोग.
यस क्यारियर को उदय धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यसैले यो अकादमी बाहिर डिजाइनरहरु मा चलाउन सम्भव छ किन छ, जो क्षेत्र मा आफ्नो लगाम लिने निर्णय गरेका थिए। ज्ञानको यो क्षेत्र सिक्दै.
यो कुनै गलत तरीका छैन, किनकि कुनै पनि ग्राफिक डिजाइन विद्यार्थी भन्दा बढी तयारीको साथ मानिसहरुको केसहरु भेट्टाउन सम्भव छ, तर हामी त्यस बारे कुरा गर्न आएका छैनौं, किनकि हामी यहाँ ट्यूटोरियल लिएर आएका छौं। कसरी तस्वीरमा कपालको रंग परिवर्तन गर्ने, ती फ्यानहरूलाई केही मिनेटमा यस प्रविधिमा मास्टर गर्न क्षमता प्रदान गर्दै।
यदि तपाईं खोजी गर्नुहुन्छ चित्रमा कपालको रंग परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईंले तल उल्लेखित चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
हामीले फोटो वा तस्बिर छान्नु पर्छ जुन हामी कपालको लागि सम्पादन गर्न चाहन्छौं।
हामी गर्नेछौं नक्कली तहहरु, एक मूल र एक प्रतिलिपि सिर्जना गर्दै।
हामी छिटो मास्क विकल्प छान्छौं, फोरग्राउन्ड र colorको साथ कालो भएको निश्चित गर्दै पृष्ठभूमि को लागी एक सेतो रंग। यो तरिकाले, हामी कपाल पेन्ट गर्न नरम ब्रश एकीकृत गर्नेछौं।
हामी छिटो मास्कलाई अक्षम बनाउँदछौं, पछिका लागि रंगहरू उल्टो गर्नुहोस् र ध्यान दिनुहोस् हामी कसरी तस्विरको कपालमा बाँकी छ यसलाई सम्पादन गर्न सक्षम हुन।
हामी एक जोड्दछौं रंग सन्तुलन समायोजन तह, जुन हामी क्लिपिंग तहमा रूपान्तरण गर्छौं। त्यसपछि हामी छायाँ, हाइलाइटहरू र मिडटोनहरूको मानहरू सार्न सक्छौं जब सम्म हामी आफूले चाहेको र get प्राप्त गर्दैनौं, जहाँ अन्तमा हामी ब्लेन्ड मोडलाई स्क्रीनमा परिवर्तन गर्नेछौं।
हामी यस्तै स्तरहरूको तह थप्छौं क्लिपिंग मास्क र त्यसपछि हामी मानहरू परिवर्तन गर्नेछौं, अस्पष्टतालाई १०% र १%% बीचमा घटाउँदै।
हामीले अपेक्षित र obtain प्राप्त नगरेसम्म अस्पष्टता कम गर्नुपर्नेछ।
यी हुन् कपालको रंग परिवर्तन गर्न हामीले लिनु पर्ने कदमहरू एडोब फोटोशप प्रोग्राम मार्फत एक छविमा। यो कुनै पनि जटिल छैन, कोशिस गर्दा यो केहि सरल र चाखलाग्दो हुनेछ, त्यसैले अभ्यासबाट तपाईंले प्राविधिक पाउनुहुनेछ जुन तपाईंको रुचिको उत्तम सूट गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » फोटोशपको माध्यमबाट छविमा कपालको रंग कसरी परिवर्तन गर्ने